Ny dokotera anglisy dia nanameloka ny fanapaha-kevitra hanafoana ny fameperana COVID-19 amin'ny 19 Jolay
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny dokotera anglisy dia nanameloka ny fanapaha-kevitra hanafoana ny fameperana COVID-19 amin'ny 19 Jolay
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Tsy ara-dalàna sy tsy lojika: ny dokotera UK dia nanameloka ny fanapaha-kevitra hanafoana ny fameperana COVID-19 amin'ny 19 Jolay
Antsoin'ny dokotera anglisy hoe Unethical. Miaraka amin'ny isan'ireo tranga COVID-19 vaovao miakatra haingana ary vaksiny mbola tsy manome tsimatimanota ny omby, nampitandrina ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana sy siantifika fa "mialoha ny fotoana" ny famohana an'i Angletera tamin'ny 19 Jolay.
Ao anatin'ny "vanin-taona feno korontana sy fikorontanana" i UK satria sady tsy "mitandrina" no "voafehy" ny tetika hamohana.
Ny fanapaha-kevitry ny praiminisitra Boris Johnson dia sady “mampidi-doza no mialoha ny fotoana”, hoy ilay taratasy, ary koa “tsy etika sy tsy lojika”.
Aretina mihoatra ny 32,500 no voarakitra tamin'ny 7 Jolay manerana an'i Angletera - ny isan'ny avo indrindra ao amin'ny firenena hatramin'ny volana Janoary.
Tao amin'ny taratasim-bahoaka, mitondra ny lohateny hoe "Memorandum Against Mass Infection", mpitsabo anglisy sy mpahay siansa 100 mahery no nanameloka an'io UK ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanafoana ny fetra COVID-19 rehetra any Angletera amin'ny 19 Jolay ho "tsy etika".
Ny taratasy nosoratana sy nosoniavin'ny mpitsabo maherin'ny 100 dia navoaka omaly tao amin'ny sehatry ny fifanoratana ao amin'ny gazety ara-pitsaboana The Lancet.
Miaraka amin'ny isan'ny tranga COVID-19 vaovao miakatra haingana ary tsy mbola manome tsimatimanota ny vaksiny, nampitandrina ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana sy ny siantifika fa "mialoha ny fotoana" ny famohana an'i Angletera tamin'ny 19 Jolay.
Aretina mihoatra ny 32,500 no voarakitra tamin'ny 7 Jolay manerana ny UK - ny avo indrindra amin'ny firenena hatramin'ny volana Janoary.
Raha jerena fa mirongatra tranga vaovao i UK amin'izao fotoana izao, ny fanapahan-kevitry ny praiminisitra Boris Johnson dia “mampidi-doza sady tsy tonga aloha”, hoy ilay taratasy, ary koa “tsy etika sy tsy lojika”.
Ny missive dia manaraka ny fanambarana nataon'ny sekretera UK Health vao notendrena, Sajid Javid, izay naneho hevitra andro vitsivitsy talohan'izay fa mety hahatratra 100,000 isan'andro ny aretin'ny fahavaratra.
Nampitandrina ihany koa ilay taratasy fa na dia ampahany betsaka amin'ny mponina aza no nanaovana fampidirana aretina, miaraka amin'ny 86.4% efa nahazo ny fatra voalohany ary efa 65% ny vaksiny feno, mbola tsy tratra ny fiarovana ny vaksinina ary tsy amin'ny 19 Jolay. ny loza ateraky ny 'COVID lava' izay mety hijaly ireo marary aorian'ny viriosy. Long COVID dia toe-javatra iainan'ny mararin'ny coronavirus sasany aorian'ny aretina tany am-boalohany ary afaka miseho ho toy ny olana amin'ny fisefosefoana, tsy fofona ary tsiro ary reraka.